Talata 08 Septambra 2020. – FJKM
Talata 08 Septambra 2020.
Ny fatahorana an’Andriamanitra
Ny momba ny fatahorana an’ Andriamanitra no hafatra tena asongadina manerana ny bokin’ny Ohabolana manontolo araka ny hevitry ny mpahay Baiboly . Farafahakeliny mantsy dia miverina in-13 izany voambolana izany ato , ary mbola hita amin’ny endri-boambolana hafa koa aza. Lazaina hoe : teny fanevan’ny boky ny fatahorana ny Tompo ary misy mpahay Baiboly milaza koa hoe : toro-làlana ho an’ny mpamaky izany . Ny fatahorana resahina eto dia tsy atao noho ny zavatra mampahory velively akory fa fiankohofana, fankatoavana, fanajana tanteraka ary atao am-panetrentena ho an’ Andriamanitra kosa ary miaraka hatrany amin’ny fankalazana sy fiderana Azy izany. Misy toetran’olona 2 samy hafa aseho eo amin’ny and 7 dia :
Rehefa manana izany fatahorana an’ Andriamanitra izany ny hendry dia lazina hoe manam-pahalalana izy ary miandoha amin’izay ny fahendreny . Toetra itaomana sy ampianarina ny olona izany , indrindra ho an’ny kristiana .Takina izy ireo mba hanam-pahendrena ka fantatra amin’ny fananany tahotra an’Andriamanitra izany ary amin’ny ataony rehetra koa .
Tsy miraharaha izany fatahorana an’Andriamanitra izany ny adala . Izy rahateo dia efa adala ka ny fanamavoana ny fahendrena sy ny fitsipika samihafa mitondra ho amin’ny fatahorana no tena manavanana azy. Manoloana izany dia omena ny kristiana iza toro-làlana izao mba handinihany ny tenany sy ny ataony rehetra raha ho mendrika ny maha-kristiana azy tokoa na tsia.
Mbola misy ve ny hendry ? Ahoana no atao mba hahamafy orina ny fahendrena?